Fumanisa ezona ndlela zintle zokukhulisa iinwele zakho | IBezzia
Amaqhinga okukhulisa iinwele
Susana Garcia | 10/06/2021 20:00 | Ubuhle, Iindlela zobuhle
Kwizihlandlo ezininzi thina sicheba iinwele kwaye phantse kwangoko sifuna ukuba zikhule kwakhona ukuba neenwele ezintle kwakhona. Nangona kule mihla iinwele zinxitywe kakhulu nge-midi kunye nokusikwa okufutshane, baninzi abantu abafuna ukuba iinwele zabo zikhule zibe nemana ende. Ke siza kubona amanye amaqhinga ukuze ezi zinwele zikhule ngokukhawuleza kwaye ngenxa yoko ziphinde zibuyele iinwele ezinde ezenza iinwele ezinomdla.
Kukho ezinye amaqhinga okukhulisa iinweleNangona kufuneka sithathele ingqalelo ukuba iinwele zinobude obumiselwe ngokwemfuza kunye nesantya sokukhula kweenwele kuxhomekeke kumntu ngamnye. Kodwa ngaphakathi kwezi paramitha singenza ukuba iinwele zikhule ngcono kwaye sinokuzinceda ukuba zikhule ngokukhawuleza kwaye zomelele.
1 Musa ukulindela imimangaliso
2 Qaphela xa uyihlamba
3 Sebenzisa i-rosemary
4 Thatha izongezo
Musa ukulindela imimangaliso
Into yokuqala Kuya kufuneka uyazi ukuba awufanelanga ukulindela imimangaliso, kuba ngokubanzi iinwele zomntu wonke zithatha ixesha ukukhula kwaye zikhula malunga nesentimitha enye ngenyanga. Kodwa ngaphakathi koku, sinokuhlala sinceda iinwele ukuba zikhule ngokukhawuleza kwaye zinamandla angakumbi. Kubalulekile ukuba ungabi nethemba elininzi lokufumana imane ngexesha elifutshane. Ukuba sinomnyhadala kwaye sifuna ukubonisa iinwele sinokuhlala sibhenela kulwandiso olukhulu.
Qaphela xa uyihlamba
Ukuhlamba yi umkhwa ekufuneka siwunike ukubaluleka kwawo. Ukuhlamba iinwele kubalulekile ukuze zikhule zisempilweni nanjengoko kungasuswa ubumdaka kwindawo yentloko, kodwa ukuzihlamba ngokugqithisileyo kunokuzonakalisa kwaye konakalise isikhumba entloko, kude kubangele ukuba iwe okanye uqhekeke, usenze sibonakale sisifutshane kwaye sisempilweni. Kuya kufuneka uyihlambe ngeshampu efanelekileyo, ukuba kunokwenzeka ishampu yendalo engazisusi ioyile kwizinwele zakho kwaye ayongezi silicone okanye parabens kwifomula. Hlamba ngobunono iinwele kwindawo yentloko, uyeke isepha ibaleke iye eziphelweni kodwa ngaphandle kokurabha.
El i-conditioner kunye nemaski kubalulekile ukuthambisa iinwele kwaye unakekele iziphelo, ezihlala zomile ngakumbi. I-conditioner kufuneka isetyenziswe yonke imihla xa sihlamba iinwele zethu, kodwa imaski isetyenziswa kuphela ngamanye amaxesha. Ezi mveliso zisinceda ukuba sikhathalele iziphelo kwaye sizithintele ukuba zingaphuli kwaye zonakalise, zibangele ukuba iinwele ziphulukane nenxalenye yobude bayo kwinkqubo.
IRosemary yimveliso enceda iinwele ukuba zikhule kakuhle kuba iyanceda ukuphucula ukujikeleza kwindawo yentloko. Ukuba ukujikeleza kulungile, unkcenkceshela iifollic zeenwele ezenza ukuba iinwele zikhule ngcono. Kukho iimveliso ezinerosemary kodwa nangayiphi na imeko unokwenza ukumiliselwa kunye nesityalo kwaye usebenzise la manzi ukuphulula ulusu lwakho. Kuya kufuneka uyenze amatyeli aliqela ngeveki ukuze ubone ukuphucuka. Ukongeza, oku kunceda iinwele ukuba zehle kancinci kumaxesha afana nasekwindla. Oku kuya kunceda ukuphucula ukujikeleza kunye nokwenza iinwele zikhule ngokukhawuleza.
Ukuba iinwele zakho azikhuli zomelele zihlala zingenxa yokuswela isondlo. Inkqubo ye- Izixhasi zeenwele zinokuba luncedo olukhulu ngamaxesha Ingena apho iwela khona kodwa naxa ikhula, kuba ukuba siyayithatha ihlala ikhula yomelele, kuba inezondlo eziyimfuneko. Zininzi izongezo kodwa phantse zonke ziqulathe izondlo ezifana ne-zinc, ivithamin B, i-iron okanye i-biotin, kuba zonke ziyanceda ekwenziweni kweenwele nokukhula kwazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Amaqhinga okukhulisa iinwele
Ungasusa njani amaqhakuva ngasemva
Ukuzivocavoca kwimilenze emincinci